Ny bitro sy ny rambony - Takila Malagasy
Ny bitro sy ny rambony (Esther Rasoloarimalala Randriamamonjy)
Mpanoratra: Esther Rasoloarimalala Randriamamonjy
Nitsidika : 1853
Angano nalaina tao amin'ny takelaky ny Ministeran'ny Kolontsaina sy ny Asantanana
Taloha elabe, hono, ny biby rehetra na kely na lebibe dia tsy mbola nisy rambo ary nampalahelo ny besinimaro izany, nampalahelo ny liona mpanjaka koa. Ny liona anefa dia tapa-kevitra fa hanamboatra rambo ho an’ ny tenany mba ho mendrika ny maha mpanjaka azy. Dia nahavita rambo tsara tarehy tokoa izy. Hatramin’ izay dia nimenomenona kosa ny biby sisa rehetra fa mba te-hanan-drambo avokoa. Noho izany dia tapa-kevitra ny besinimaro fa ny liona sy ny orsa izay mpisakaiza no hanamboatra rambo ho an’ ny biby sisa rehetra.
Vetivety foana dia vita ny rambo nilaina ary ny ekiorely no nitondra hafatra hilaza amin’ ny mponina an’ ala rehetra.
Nony tonga ny andro fizarana rambo dia samy nihazakazaka namonjy fotoana avokoa ny biby rehetra fa hisy lanonana lehibe amin’ izany. Koa samy niakanjo ny fitafiana íitondra mianjaika avokoa izy rehetra.
Ny bitro kosa, hono, tsy mba taitra fa mbola natory tao an-dava.ka. Tsy naharitra ny rajako fa namoha azy nanao hoe:
Ndeha re hiaraka amiko!
Mandehana aloha ianao fa tratrako vetivety foana, hoy ny bitro.
Lasa ihany ny fotoana nefa mbola nilaozan’ ny bitro nanenjika lolo sy nioty voninkazo. Avy indray ny orana dia hoy ny eritreriny ny bitro: «Angamba hahemotra ny lanonana noho ny orana ka hody aho aloha. »
Nony nitsahatra ny orana vao mba niainga indray ny bitro, saingy teny an- dalana nahita ny amboadia nihazakazaka hamonjy lanonana ka niantso azy hoe:
Efa ho any ihany re ianao ka mba itondray rambo anankiray aho e!
Dia lasa indray ny bitro niverina hatory tany an-tranony. Ny biby sisa rehetra kosa efa nikorana fatratra. Na dia tratra aoriana, tsy nahita ny fanombohana ny lano­nana aza ny amboadia dia mba nahazo rambo anankiroa ihany ka ny anankiray ho an’ ny tenany ary ilay faharoa ho an’ ny bitro.
Nita rano ilay amboadia nony niverina ary nibolisatra teo amin’ ny tetezana ka lasan’ ny rano ilay rambo nentiny ho an’ ny bitro. Dia nanezaka nitomany ny bitro nony hitany fa tsy nitondra rambo ho azy ny amboadia.
Ny saka sy ny alika kosa, hono, nifampidera rambo, samy nandoka tena ary farany dia raikitra ny ady. Nokaikerin’ ny alika indray mandeha ny rambon’ ny saka ka tapaka ary iny tapaky ny rambon-tsaka iny no nihazakazahan’ ny bitro nentiny nandositra mba ho azy.
Dia izany, hono, no nahatonga ny bitro tsy hanana afa-tsy rambo kely sady fohy, fa noho ny hakamoany dia voatery hihafy izy ka tapa-drambon-tsaka no in mba anaovany iny.
Angano Tetsy sy Teroa
nosoratan’i Esther Rasoloarimalala Randriamamonjy